Qingdao Huaxin Group Co., Ltd ise-west park kushishino komzi, Jiaonan, Qingdao mzi, kufutshane emzileni ezintathu-umendo abaneemitha 100 kude, Jiaoji kaloliwe, liuting moya yamazwe ngamazwe, ukuba bay wokuweza, umhlaba nolwandle kunye nezithuthi emoyeni links zangaphambili , indawo elula kakhulu.
Le nkampani owasekwa ngo-1998, kukho a kudityaniswe ukuyila kunye nemveliso, imveliso, ufakelo, ukuthengiswa kunye namashishini tshaba inkonzo asebenze ngokusondeleyo kunye. Ukulahlwa sele iqalile ukwenza isiseko yasekhaya kwimveliso izixhobo noomatshini. Company ikakhulu abasebenzi abangamachule, abaphathi kunye nabasebenzi masifundisane iminyaka engaphezu kweshumi amava imveliso ubugcisa kushishino eyahlulayo.
(A) ipleyiti QXY series sentsimbi, Ngokufutha kudwelisa Ngokufutha shot umatshini ucocekile-up, Q32 umkhondo wadubula umatshini ucocekile-up, Q37 series hook uhlobo airless udubulo shot zokucoca umatshini, nokuphalazeka kwelifu Q38, Q48 series ikhonkco ezijingayo shot umatshini ucocekile-up, Q69 series plate steel rail, isakhiwo wadubula umatshini wokucoca udubulo. Q35 uhlobo jikwa, Q76 series udubule ukufutha umatshini ucocekile-up, umbhobho series intsimbi QGW udonga olungaphandle umatshini ucocekile-up, Q31 igubu-uhlobo umatshini ucocekile-up, S11series intlabathi lokuxhuba.
(B) Ukubumbela kumatshini: Z143 series, Z145 series, Z146 series, Z148 series
ukudubula enguNdoqo umatshini: Z86series, ZHTO600 / 700, ZH87series, Z94 series
kumatshini Shell ezingundoqo: Z95 series
(C) Umthamo yonyaka imveliso 3000 ukuya 10000 iitoni uthotho intlabathi intlaka-yesondo, umgca imveliso isanti udongwe.
(D) liqhuba iimfuno ezizodwa kubasebenzisi ezahlukeneyo lokucoca intlabathi yokuphatha oomatshini kunye neentlobo-ntlobo kuyilo ngomatshini, imveliso.
Le nkampani iye yomelelani nincedwa ngamandla zobugcisa, ubugcisa bemveliso advanced, lithetha ubhaqo egqibeleleyo, inkqubo yolawulo yenzululwazi kunye nenkqubo engqongqo zoqinisekiso lomgangatho ngokuhambelana neemfuno zamazwe ngamazwe ukubaleka.
Inkampani yethu ngqo kwi "ukuthembeka + umgangatho ezintsha + + inkonzo" ingqiqo urhwebo, ubugcisa bemveliso advanced, iimfuno engqongqo umgangatho, uluhlu olupheleleyo ulawulo kunye nolawulo. Market -oriented igama, inkonzo enyanisekileyo njengekhrayitheriya.
Le nkampani bonke abasebenzi ukufumana abantu abavela kulo lonke ihlabathi ukuba bajoyine, ndamkele abathengi abatsha nabadala ukuba beze nokukhokela umsebenzi.